Daawo Maanta Oo Kale 10 Sannadood Ka Hor Sida Uu Emmanuel Adebayor Qalbiga Uga Jabiyay Taageerayaasha Arsenal | Laacib.net
Daawo Maanta Oo Kale 10 Sannadood Ka Hor Sida Uu Emmanuel Adebayor Qalbiga Uga Jabiyay Taageerayaasha Arsenal
September 12, 2019 Balaleti Comments Off on Daawo Maanta Oo Kale 10 Sannadood Ka Hor Sida Uu Emmanuel Adebayor Qalbiga Uga Jabiyay Taageerayaasha Arsenal
Toban sannadood ayaa laga joogaa maanta markii uu Emmanuel Adebayor ku hor dabaaldegay taageerayaasha Arsenal ciyaar ka dhacday garoonka Etihad Stadium, taageerayaasha kubada cagta ayaana aaminsan in Gunners uu isbedel ku dhacay wixii ka danbeeyay maalintaas.
Inkastoo ay seddex FA Cup ku guuleysteen intii u dhaxeysay 2014 iyo 2017, taageerayaasha kooxda kale ee Premier League ayaa aaminsan in Gunners aysan ka soo kabsanin weli dabaaldegii uu qalbiga kaga jabiyay Adebayor.
Xiddiga reer Togo ayaa ka tagay Arsenal kuna biiray Manchester City sannadii 2009 iyadoo lagu iibsaday 25 milyan ginni, waxa uu saameyn yeeshay kulankii ugu horeysay ee uu ka horyimid kooxdiisa hore.
Durbadii uu uu kubad madax ah ka dhaliyay, waxa uu orod ku tagay qeybta ay garoonka ka joogeen taageerayaasha Arsenal, waxaana uu ku taraaraxay jilbaha, taasoo ka careysiisay taageerayaasha martida ahaa ee Gunners.
Dhalooyin iyo waxyaabo kale ayaa lagu soo tuuray ciyaaryahanka, iyadoo Adebayor uu ganaax 25 kun ginni kala kulmay FA-ga dabaaldegaas darteed.
RIix Halkaan Si Aad U Akhriso: Granada Oo Cashar U Dhigtay Barcelona Lana Wareegtay Hogaanka La Liga, Barca Oo Markii 2aad La Garaacay & Valverde Oo Shaqadiisa Loo Baqayo
Weeraryahankii hore ee Tottenham ayaa shaaca ka qaaday in sababtii uu ugu hor dabaaldegay taageerayaasha kooxdiisa hore inay aheyd inay ku heesayeen ereyo cunsurinimo ah oo isaga ka dhan ah islamarkaana uu doonayay inuu aamusiyo.
“Waxaan xusuustaa taageerayaasha Arsenal oo ku heesaya: “Hooyadaa waa dh*lo, aabahaana wuxuu dhaqaa maroodiyaasha.’
“Aabaheey wuxuu ka shaqeynayay sarifka lacagaha, hooyadeey waa ganacsato. Sidee ugu jawaabi karaa? Ma heysto cod aan kula hadlo kumanaan taageerayaash ah” ayuu yiri Adebayor.
How is this ten years ago 🤯#OnThisDay in 2009, @E_Adebayor scored and celebrated in front of the Arsenal fans 👀pic.twitter.com/XY0fwIwuHV
Taageerayaasha kooxda kale ayaa Twitter ku soo qoraya in Arsenal aysan weli ka soo kabsanin dabaaldegaas.
Mid ayaa soo qoray: Dabaaldegaas waxa uu burburiyay Arsenal…tan iyo markaas sidoodii hore kuma aysan laaban”
Mid kale ayaa soo qoray: “Weli kama aysan soo kabsan.”
Taageere seddexaad ayaa yiri: “Waqtigaan waa markii ay Arsenal noqotay koox meel dhexaad ah.”
Mid kale ayaa soo qoray: “10 sannadood ka hor, waxay ku qaadatay hal halyeey in ilibiriqsi gudahood qalbiga uga jabiyo taageerayaal dhan.”